Imfundiso yeBuddhist kwiNirvana kunye neNkanyiso
Ngaba Unako Ukuba Unye Ngaphandle Kweminye?
Abantu bahlala becinga ukuba ukukhanyiselwa kunye ne-nirvana yinto enye okanye izinto ezihlukeneyo.
Faka enye indlela, xa umntu eqonda ukukhanyiselwa, ngaba enye ingena kwi-nirvana ngokukhawuleza, okanye ikhona ixesha elithile? Ngaba umntu okhanyisiweyo kufuneka alinde ade afe ngaphambi kokungena kwi-nirvana?
Kunzima ukuthetha ngokukhanyisa kunye ne-nirvana, kuba ezi zinto zingaphandle kwamava "okuqhelekileyo" kunye nobubanzi beengcamango zomqondo.
Abanye baya kukuxelela ukuba ukuthetha ngalezi zinto kuzo zonke zibaphazamisa. Nceda ugcine engqondweni.
Kwakhona kunjalo ukuba izikolo ezimbini ezibalulekileyo zeBuddha, iTheravada kunye neMayana , azichazi ukukhanya kunye ne-nirvana ngendlela efanayo. Ngaphambi kokuba sifumane impendulo yombuzo wethu, kufuneka sicacise imigangatho.
Impendulo yonyani yodwa kumbuzo othi "Yintoni ukukhanya?" kukubona ukukhanya. Okufutshane, kufuneka siphume iimpendulo zesikhashana.
Igama lesiNgesi ukukhanyiselwa ngezinye ihlandlo libhekisela ekuhlakanipheni kunye nokuqiqa. Olu hlobo lokukhanyiswa ngumgangatho onokulinywa okanye owenziwe. Kodwa ukukhanyiswa ngengqondo yeBuddhist akuwona umgangatho, kwaye akukho mntu unokuyithatha. Ndiza kuzaliseka kuphela.
AmaBuddha asekuqaleni basebenzisa igama elithi bodhi , elithetha "ukuvuswa." Igama elithi Buddha lithathwe kwi- bodhi kwaye lithetha "ukuvuswa." Ukuze ukhanyiswe kukuba kuphapheke kwinto ekhoyo ekhoyo, kodwa ininzi yethu ayiyiqondi.
Ndiyaxolisa kukudumaza, kodwa ukukhanya akukuthi "kukhishwe."
Kwi-Theravada UbuBuddha, ukukhanyiswa kuhambelana nokupheleliswa kwengqiqo eqondayo kwiZiQiniso ezine eziNazileyo, eziza kupheliswa kwe- dukkha (ukukhathazeka, uxinzelelo, ukunganeliseki).
E-Mahayana Buddhism - kuquka nezithethe ezenza iVajrayana - ukukhanyiselwa kukuqonda kwe- sunyata -imfundiso yokuba zonke izinto ezizenzekelayo zingenanto-kunye nobomi babo bonke abantu.
Amanye amaMahayana sutras agxininisa ukuba ukhanyiso luhlobo lwendalo yonke.
Funda ngakumbi: Yintoni ekhanyiselwayo (kwaye Uyazi njani ukuba "uyenayo")?
Funda ngakumbi: Izinto ezikhanyisiweyo (Ngaba zihluke ngokwenene kuthi?)
UBuddha watshela iinkokheli zakhe ukuba i-nirvana ayikwazi ukucingelwa, kwaye ngoko akukho nto icinga ngayo into efana nayo. Nangona kunjalo, liyigama elithi amaBuddha asetyenziswa, ngoko lifuna uhlobo oluthile lwencazelo.
I-Nirvana ayikho indawo, kodwa kunokuba yimeko yokuba engekhoyo kwaye ayikho. I-sutras yokuqala yathetha nge-nirvana ngokuthi "inkululeko" kunye "nokungazivumeli," okuthethi asisayibophelwa kumjikelezo wokuzalwa nokufa.
Funda ngakumbi: Yintoni i-Nirvana?
Ngoku masibuyele kumbuzo wethu wokuqala. Ngaba ukhanyiso kunye ne-nirvana into efanayo? Impendulo, ngokuqhelekileyo ayikho. Kodwa mhlawumbi ngamanye amaxesha.
I-Budrafiya yeTheravada iqonda iintlobo ezimbini ze-nirvana (okanye i- nibbana e-Pali). Ukukhanya okukhanyisiweyo kukunandipha uhlobo oluthile lwe-nirvana, okanye "i-nirvana kunye nabasalayo." Uyakwazi ukuzonwabisa kunye nentlungu kodwa akabophekanga kubo. Umntu okhanyisiweyo ungena kwi-parinirvana, okanye i-nirvana epheleleyo, ekufeni. E-Theravada, ngoko, ukukhanyiselwa kuthethwa njengomnyango kwi-nirvana, kodwa kungekhona i-nirvana ngokwayo.
U-Mahayana ugxininisa umzekelo we- bodhisattva , umntu okhanyisiweyo othembisa ukungena kwi-nirvana de kube zonke izinto zikhanyiselwa. Oku kubonisa ukukhanya kunye ne-nirvana ihluke. Nangona kunjalo, i-Mahayana ifundisa kwakhona ukuba i-nirvana ayihlukanga kwi- samsara , isondo lokuzalwa nokufa. Xa siyeka ukudala i-samsara neengqondo zethu, i-nirvana ngokwemvelo ibonakala. I-Nirvana yinto eyenyulukileyo ye-samsara.
E-Mahayana, ukucinga ngo "okufanayo" okanye "okuhlukileyo" kuya kuphantse kukungena enkingeni. Abanye abaphathi baye bathetha nge-nirvana njengento engangeniswa emva kokukhanyiselwa, kodwa mhlawumbi loo mazwi akufanele athathwe ngokoqobo.
Kutheni uMbulelo onguNyaka oDlulileyo kunyaka (kunye nezinye izinto)
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Wisconsin
Inkcazo yabesifazane kwiNkcubeko
Abadlali abaphezulu beMLB bevela ePanama